အခ်စ္ ႏွင္႔ ရသစာေပမ်ား Archives - Latest Myanmar News
အဆင်ပြေတဲ့ အချစ်ရေး ဖြစ်ဖို့အတွက် နေ့တိုင်း အမြဲတမ်း တွေ့နေစရာ မလိုပါဘူး။ အနေဝေးနေပေမယ့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နားလည်မှု ရှိနေရင် အဆင်ပြေနေမှာပါ။ အနေဝေးတဲ့ စုံတွဲတွေမှာလည်း အားသာချက်တွေ ရှိပါတယ် ။ 1. သေးသေးမွှားမွှား ဂရုစိုက်တာက အစ တန်ဖိုး ရှိပါတယ်။ ဖုန်းဆက်တာ၊ message ပို့တာက အနေဝေးသူတို့ အတွက် ပျော်စရာအချက်လေးတွေ ပါပဲ။ ပို့ထားပြီးသား message လေးတွေကို ပြန်ဖတ်ရတာ ကလည်း ကြည်နူးစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အဆက်အသွယ် မပြတ်ဖို့ကတော့ အရေးကြီး ပါတယ်။ 2. ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေ ပိုရပါတယ်။ အနေဝေးနေ တာကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတွေ့ရတဲ့ အခါ ဝါသနာပါတဲ့ … Read more
Categories အခ်စ္ ႏွင္႔ ရသစာေပမ်ား Tags အနေဝေး
မိန်းကလေးတွေဟာ ဒီလိုအချိန်တွေမှာ ကိုယ့်ရည်းစားနဲ့ လမ်းခွဲတတ်ကြတယ်… ချစ်တော့ ချစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့သော အခြေအနေတွေမှာ လက်လွှတ်လိုက်တာက ပိုပီးကောင်းပါတယ်နော် …။ အထီးကျန်လာရင်… ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူ ရှိနေပါလျက်နဲ့ အထီးကျန် နေတယ် ဆိုတာ အဓိပ္ပါယ် လုံးဝ မရှိပါဘူး။ တစ်ယောက်တည်း နေရတာ များလာတဲ့အခါ နေသားကျ သွားတတ်ပြီး ရှိနေတဲ့ ချစ်သူကိုလည်း မလိုအပ်တော့ဘူး လို့ ထင်လာတတ် ကြပါတယ် …။ အသိအမှတ်ပြု မခံရရင်… အပြင်တွေ ဘာတွေ သွားတဲ့အခါ လက်မကိုင် ဖြစ်တာ၊ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေနဲ့ တွေ့ရင် ကိုယ့်ကို ချစ်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခြင်း မခံရတာတွေဟာ ဝေးကွာခြင်းရဲ့ အစ ဖြစ်ပါတယ် …။ ခန့်မှန်းရ လွယ်နေရင်… … Read more
Categories အခ်စ္ ႏွင္႔ ရသစာေပမ်ား Tags မိန်းကလေ
ကိုယ့်ချစ်သူမှာ ဒီလိုအရည်ချင်းတွေရှိနေပြီဆိုရင် လက်မလွှတ်နဲ့နော်
February 15, 2021 by Latest Myanmar News
ရှားပါးစာရင်းဝင် ချစ်သူလက္ခဏာ (၅) မျိုး…ဒီလိုလူမျိုးတွေ့ရင် လုံးဝ လက်လွတ်မခံပါနဲ့နော် အချစ်စစ် ဆိုတာ တဖြည်းဖြည်း ရှားပါး လာတာနဲ့ အမျှ သင့်ကို စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ ချစ်တဲ့သူ၊ ဘာအကျိုးကိုမှ မမျှော်ကိုးပဲချစ်တဲ့သူ ၊ သစ္စာရှိရှိ ချစ်တဲ့သူဆိုတာတကယ်ကို ရှားပါးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ခုဖော်ပြတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေတဲ့ ချစ်သူ မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတယ် ဆိုရင်တော့ သင်ဟာအရမ်းကို ကံကောင်းတာကြောင့် လက်လွှတ်မခံပါနဲ့လို့ ပြောပါရစေနော်။ (၁) သင့်ဆီက ဘာမှမမက်မောဘူး။ ဒီလို မိန်းကလေး မျိုးဟာ သင့်ရဲ့ နောက်ကြောင်းတွေ၊ ကျောထောက်နောက်ခံတွေ၊ သင့်ရဲ့ဂုဏ်တွေ၊ ငွေကြေးချမ်းသာမှုတွေကို စိတ်မ ဝင်စားတဲ့သူပါ …။သူ့စိတ်ထဲမှာ သင့်ကိုသင်လို့ပဲ မြင်ပြီး သင်ဆင်းရဲသည် ဖြစ်စေ၊ ချမ်းသာသည် ဖြစ်စေ၊ သင့်ကိုအမြဲတမ်း … Read more
အိမ်ထောင်ရေးအတွက် မိတ်ဖက် ၊ ရန်ဖက်နေ့နံလေး များ
အိမ်ထောင်ဖက် ၊ မိတ်ဖက် ၊ ရန်ဖက်နေ့များ အိမ်ထောင်ဖက် ဦးသာ စိန်ပန်း ဒန်းလှ ကိုရှာ အိမ်ထောင်ဖက်အသက်ရှည် ဦး သာ. – တနင်္ဂနွေ နှင့် သောကြာ စိန် ပန်း – အင်္ဂါ နှင့် ကြာသပတေး ဒန်း လှ -စနေ နှင့် ဗုဒ္ဓဟူး မိတ်ဖက်နေ့များ အောင်ပ ကုလား ဆွေသား တော်ရင်း မိတ်ဖက်သွင်း အောင် ပ -တနင်္ဂနွေ နှင့်ကြာသပတေး ကု လား -တနင်္လာ နှင့် ဗုဒ္ဓဟူး ဆွေ သား -အင်္ဂါ နှင့် သောကြာ တော် ရင်း -စနေ နှင့် ဗုဒ္ဓဟူး ရန်ဘက်နေ့များ ဦးညို … Read more
လူတိုင်းအတွက် ငွေနဲ့ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရတဲ့ အရေးပါတဲ့ အရာတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အရာတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားရင်တော့ တကယ့်ကို ပျော်ရွှင်ရတဲ့ ဘဝကို ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်ရတဲ့ သူတွေက ငွေရှိခြင်း မရှိခြင်းထက် ကိုယ်မြတ်နိုးရတဲ့ အခြေအနေမျိုး ပိုင်ဆိုင်မှသာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အပျော်ရွှင်ရဆုံးသော မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ဒီလို အရာတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတတ်ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစု ပျော်ရွှင်ရတဲ့ မိသားစုဆိုတာ ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့ မိသားစုလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နားလည်ပေးတတ်ပြီး နွေးထွေးမှုလည်း ရှိကြတဲ့ အခက်အခဲရှိရင်တောင် အတူ ရင်ဆိုင်ကြတဲ့ မိသားစုမျိုး ပါ။ မိသားစုလို ခံစားရစေတဲ့ မိသားစုမျိုးကို လူတိုင်း မရနိုင်ကြပါဘူး။ ဒီလိုမျိုး … Read more
Categories အခ်စ္ ႏွင္႔ ရသစာေပမ်ား Tags အပျော်ရွှင်ရဆုံး
တန်ဖိုးမသိတဲ့ လူတွေအတွက်နဲ့ ကျွန်မတန်ဖိုးကို မမဲ့ချင်ဘူး
တန်ဖိုးမသိတဲ့ လူတွေအတွက်နဲ့ ကျွန်မတန်ဖိုးကို မမဲ့ချင်ဘူး ကျွန်မလျှောက်တဲ့လမ်းက ဆူးခင်းလမ်းဖြစ်နေခဲ့ရင်တောင် ကျွန်မဆက်လျှောက်ဖို့ ဝန်မလေးဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိနေလို့ပါပဲ။ကျွန်မဘဝက ကြမ်းတမ်းတယ်လို့ ငြီးပြီးငိုမနေဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို ကျွန်မဝမ်းနည်းရင် နှစ်သိမ့်မယ့်သူက ကျွန်မပဲဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ကျွန်မ လဲကျခဲ့ရင်တောင် ပြန်ထဖို့လက်တစ်စုံကိုစောင့် မနေခဲ့ဖူးဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို ကျွန်မခွန်အားနဲ့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ပြန်ထတတ်အောင် အရှုံးတွေထဲက ခဏခဏသင်ခန်းစာတွေရခဲ့ဖူးလို့ပါပဲ။ ကျွန်မချစ်နေခဲ့ရင်တောင် မေ့ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြန်တမ်းတနေမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို အချစ်က ခါးသီးစွာရခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာဆိုတာခဏခဏ ထိုးဆွနေလို့ ခံစားရနေတာထက် ပိုပြီး မချစ်တတ်အောင် သတိတွေပေးနေတတ်လို့ပါပဲ။ ကျွန်မအတွက် ကျွန်မအသင့်ရှိနေဖို့ ကျွန်မကျန်းမာနေဖို့လိုတယ်။ကျွန်မအတွက် ကျွန်မခွန်အားတွေပေးနေဖို့ စာပေဖတ်ရှု့ပြီး ဦးနှောက်အာဟာရပြည့်နေဖို့တယ်။ ကျွန်မအတွက် ကျွန်မရှိနေဖို့အာဟာရအတွက် ခန္ဓာကိုယ် ဖြည့်စွက်စာနဲ့ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်အချိန်ပေးဖို့လိုတယ်။ ကျွန်မအတွက် ဘယ်သူမှ မလိုပါဘူး မိသားစုပြီးရင် မကောင်းတဲ့သူတွေထက်ကျွန်မအတွက် … Read more
Categories အခ်စ္ ႏွင္႔ ရသစာေပမ်ား Tags တန်ဖိုး
သတိိထားရမည္႔ မိတ္ေဆြအတုုေယာင္ (၇)မ်ိဳး ကြၽန္ေတာ္တို႔ိအားလုံးမွာ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြလို႔ ေခၚလို႔ရတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလို မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းေတြထဲမွာ..၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ မိိတ္ေဆြစစ္ မိတ္ေဆြမွန္ေတြ ရွိသလို အက်ိဳးေမွ်ာ္ေပါင္းသင္းၿပီး အခြင့္အေရးရတာနဲ႔ ေျခထိုးခံဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ မိတ္ေဆြအတုအေယာင္ေတြလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္..။ ဒီလိုလူအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ မိတ္ေဆြျဖစ္တဲ့အခါ သူတို႔ကို ယုံၾကည္ထားမယ္၊ သူတိုိ႔နဲ႔အခ်ိန္ျဖဳန္းမယ္ဆိုေပမယ့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႀကဳံရတဲ့အခါက်မွ သူတို႔ရဲ႕သဘာဝအမွန္ေတြကို ေတြ႕ရႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္..။ မိတ္ေဆြအတုအေယာင္ေတြကို ခြဲျခားဖို႔က ခက္ခဲပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကိုိလည္း နားလည္ႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုေဖာ္ျပမယ့္လူမ်ိဳးေတြကေတာ့ မိတ္ေဆြတုျဖစ္ဖို႔ အလားအလာမ်ားတာေၾကာင့္ သတိနဲ႔ေပါင္းသင္းဆက္ဆံဖို႔ လိုပါတယ္..။ ၁။ ႀကိဳးကိုိင္ခ်ယ္လွယ္သူ ႀကိဳးကိုင္ခ်ယ္လွယ္သူေတြက သိိရွိႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲတာေၾကာင့္ အႏၲရာယ္အမ်ားဆုံး မိတ္ေဆြတုေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္..။ ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳမႈနဲ႔ ယုံၾကည္မႈကို ရၿပီဆိုတာနဲ႔ … Read more
မ်က္ရည္္ လြယ္သူေတြဟာ စိတ္ဓာတ္ေပ်ာ့ညံ့ံ သူေတြမဟုတ္ဘူး
August 4, 2020 by Latest Myanmar News
တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြြထစ္ကနဲ႔ဆို္ မ်က္ရည္လြယ္တယ္ အဲ့ဒီအေျခအေနကို စိတ္ဓာတ္ေပ်ာ့ညံ့တယ္လို႔ိ မထင္လို္က္နဲ႔။ စိတ္ခံစားခ်က္ ျပင္းျပတယ္လို႔လည္းမေတြးနဲ႔ သူတို႔ခ်စ္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုမထိခိုက္ေစခ်င္လို႔..၊ ေဒါသကို္မ်က္ရည္နဲ႔ ေဖ်ာ္ခ်လိုက္တာ။အဲ့ဒီလူေတြဟာ အရာရာကို ရင္ဘက္နဲ႔ပဲ ေပါင္းသင္းတတ္တယ္..။ အကယ္၍ သူတို္႔ မ်က္ရည္ မက်ေတာ့ဘူးဆိုရင္ေသခ်ာတယ္။အဲ့ဒီလူဟာသူခ်စ္တဲ့ပတ္ဝန္းက်င္ (သို႔မဟုတ္) သူျမတ္္ႏိုးတဲ့ အရာေတြအေပၚမွာ အရာရာကို ေဘးဖယ္ထားလိုက္ၿပီလို႔ သတ္မွတ္လို႔ရတယ္..။ တစ္နည္းေျပာရရင္ေတာ့ ဥေပကၡာျပဳဖိုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္တာပဲ။ဒါေၾကာင့္ မ်က္ရည္လြယ္တဲ့သူေတြဟာစိိတ္ဓါတ္ေပ်ာ့ညံ့တာ မဟုတ္မွန္းသိေစခ်င္တယ္..။ ခရစ္ဒစ္္ Unicode တစ်ချို့လူတွွေထစ်ကနဲ့ဆို် မျက်ရည်လွယ်တယ် အဲ့ဒီအခြေအနေကို စိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့တယ်လိို့ မထင်လို်က်နဲ့။ စိတ်ခံစားချက် ပြင်းပြတယ်လို့လည်းမတွေးနဲ့ သူတို့ချစ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေချင်လို့..၊ ဒေါသကို်မျက်ရည်နဲ့ ဖျော်ချလိုက်တာ။အဲ့ဒီလူတွေဟာ အရာရာကို ရင်ဘက်နဲ့ပဲ ပေါင်းသင်းတတ်တယ်..။ အကယ်၍ သူတို့် မျက်ရည် မကျတော့ဘူးဆိုရင်သေချာတယ်။အဲ့ဒီလူဟာသူချစ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင် (သို့မဟုတ်) သူမြတ််နိုးတဲ့ အရာတွေအပေါ်မှာ အရာရာကို ဘေးဖယ်ထားလိုက်ပြီလို့ သတ်မှတ်လို့ရတယ်..။ … Read more
တကယ္ခ်စ္္တဲ႔သူေတြမွာသာ ရွိိေနနိုင္မည္႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခံစားခ်က္(၁၃)ခ်က္(တကယ္ခ်စ္မခ်စ္ စစ္လိုက္ပါ)
July 22, 2020 by Latest Myanmar News
လူတစ္ေယာက္ကိုိ တကယ္ခ်စ္တဲ့အခါ ၿဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားခ်က္္ (၁၃) ခ်က္ (၁) မနက္မိုးလင္းလို့ မ်က္စိႏွွစ္လံုးဖြင့္လိုက္တာနဲ့ သူ့မ်က္ႏွာေလးကိုအရင္ဦးဆံုး ၿမင္ေယာင္တတ္ယ္..။ (၂) ဖုန္း ringtone သံၾကားတိုိင္း၊ မက္ေဆ့ တစ္ခု၀င္တိုင္း သူမ်ားလားဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးနဲ့ ဖုန္းကို ကမမ္းကတမ္း ဖြင့္ၾကည့္တတ္တယ္..။ (သူမဟုတ္ဘူးဆိုိတာ သိလိုိက္ရရင္ စိတ္ထဲမွာ အလိုလို ၀မ္းနဲသြားတယ္ ) (၃) သူနဲ့စိိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္တဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ထမင္းစားလို့မ်ဳိခ်ရင္ေတာင္ ရင္ထဲမွာဆို့ေနတတ္တယ္..။ (၄) ဘယ္ေလာက္ပဲ စိိတ္ညစ္စရာေတြနဲ့ၾကံၾကဳံ ဘယ္လို အခက္အခဲေတြပဲရွိရွိ သူ့ရဲ့ အားေပးႏွစ္သိမ့္တဲ့ စကားကို ၾကားလိုိက္ရရင္ အနည္းနဲ့အမ်ားေတာ့ စိတ္သက္သာရာ ရသြားတတ္တယ္..။ (၅) တိုိက္ဆိုင္မွုတစ္ခုခုရွိတိုင္း (သူနဲ့အတူတူသြားခဲ့ဖူးတဲ့ေနရာေရာက္တိုင္း၊ သူၾကဳိက္တတ္တဲ့ အစားအစာတစ္ခုစားတိုိင္း ) သူ့ကို အရင္ကထက္ပိုၿပီး သတိရသြားတတ္တယ္..။ (၆) … Read more